2017 ခုနှစ်တွင်ထိပ်ဆုံး SEO ဆိုသည်မှာအဆင့်အချက်များဘာတွေလဲ?
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 3, 2017 တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 3, 2017 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုမြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေရန်ကုမ္ပဏီကြီးများစွာနှင့်အလုပ်လုပ်နေပြီး၎င်းတို့၏ယခင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုအမှန်တကယ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ကုန်ကျ သူတို့ကိုရရှိမှုမဟုတ်။ သူတို့ကစာသားဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းမြင်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပေးဆပ်နေတယ်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဒိုမိန်းလယ်ယာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသော့ချက်စာလုံးများအားလုံးရရှိနိုင်သောစာမျက်နှာတိုများပေါ်လာပြီးဆိုဒ်များအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ရလဒ်မှာဒိုမိန်းများ၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ အမှတ်တံဆိပ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များဖြစ်သည်။ ဒိုမိန်းတွေအားလုံးကိုတစ်ကြောင်းတည်းပြောင်းပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက်အလွန်သိသာထင်ရှားတဲ့စာမျက်နှာတွေတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ရက် ၉၀ အတွင်းမှာသူတို့ဟာသူတို့ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာမကျော်လွန်ဘူး။
သင်၏ SEO အတိုင်ပင်ခံလျှင် optimization the ည့်သည်၏အတွေ့အကြုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းအပြင်အခြားအလုပ်များပါဝင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေနိုင်သည်။ Douglas Karr, DK New Media
Dot Com Infoway မှဤသတင်းအချက်အလက်သည်မြင်သာမှုရရှိရန်သင်မျှော်လင့်ပါကသင်လုပ်သင့်သောအလုပ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်သည်။
မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှု - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများသည်မိုဘိုင်းကိုအသုံးပြုလာသည်နှင့်အမျှသင်၏မိုဘိုင်းစာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်၊ Google AMP.
ဒေသတွင်းရလဒ်များ ငါတို့နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီ ဒေသခံရှာဖွေရေးမြင်ကွင်းအမျိုးသားရေးမြင်နိုင်ကူညီပေးသည် ဒါပေမယ့်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကုမ္ပဏီဘယ်လောက်လျစ်လျူရှုထားသလဲဆိုတာကအံ့သြစရာပဲ သင့်ကုမ္ပဏီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စာရင်းသွင်းပါ စီးပွားရေးအတွက်ဂူဂဲလ် နှင့်အညွှန်းကိုသုံးပါ (NAP - အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတိုင်းရှိစာမျက်နှာများတွင်။
အရည်အသွေးအကြောင်းအရာနှင့်လင့်များ - ကြီးစွာသောအတိုင်ပင်ခံများကြီးထွားလာပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသူများသည်သင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာ (ဥပမာ infographics ကဲ့သို့) အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားပြသသောသက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (DCI အတွက်လုပ်နေသလိုမျိုး) ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သင့်သည်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ site ကိုပြန်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် ad-hoc အားမရ website ရဲ့ backlink ဆီလျှော်မှုမရှိသောအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောဒိုမိန်းများကသင့်ကိုဘယ်နေရာမှရောက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများ - ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုအနိုင်ယူခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောလင့်ခ်များကိုပိတ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြချက်များတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းအဖြေများပေးခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာများအသံလွှင့်ခြင်းများ၊ အသံရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန် - အကြောင်းအရာပုံစံအမျိုးမျိုး (အသံ၊ ဗွီဒီယို၊ သတင်းစာ၊ ရုပ်ပုံ၊ သင့်ရဲ့ content တွေကိုမြှင့်တင်ရန်အကြီးအမဟာဗျူဟာများ။
ဒီနေရာမှာ infographic ပါ။ 2017 ခုနှစ်တွင် Google SEO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်များနှင့်မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာ:
Tags: အသံနောက်ကြောင်းပြန်dciDK New Mediacom infoway အစက်ဂူဂဲလ် ampကျွန်တော့်စီးပွားရေး GoogleGoogle အဆင့်အချက်များစီးပွားရေးအတွက် google +ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးဒေသခံရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဒေသခံရှာဖွေရေးမြင်နိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများmicrographicsလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်NAPအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်များseose မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများseo အဆင့်အချက်များလူမှုရေး
၁၅ သတင်းထောက်များနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများကိုရှာဖွေ၊ ရှာဖွေရန်အရင်းအမြစ်များ
လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အတူ Nagging ပြProbleနာခုနစ်ခု
သြဂုတ် 12, 2011 မှာ 9: 56 AM
SEO အဆင့်နှင့်ယာဉ်အသွားအလာတွင် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ လူတိုင်းသည်အဆင့်မြင့်သောနေရာများနှင့်ယာဉ်အသွားအလာပိုမိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ပိုမိုသောအသွားအလာအကြောင်းအရာများရရှိရန်၊ သော့ချက်စာလုံး၊ စာမျက်နှာ download speed အားလုံးပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများနှင့်အတူကိုယ်ပိုင် site ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကောင်းတဲ့ infographic ဖြစ်ပါတယ်။
seo link ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု
10:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 29 တွင်
hehehe .... တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊
ဧပြီ 6, 2017 မှာ 12: 32 AM
သတင်းအချက်အလက်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ ဒီအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါး Douglas အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! Guest ည့်သည်ကိုချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုနည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနှစ်ထိထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလား။
ဧပြီ 6, 2017 မှာ 12: 35 AM
ဟုတ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်ထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဝက်ဝံဆောင်းပါးတွေကိုငြီးငွေ့နေပြီး၊ ရှေးရှေးတွေကကျနော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်သည်သတင်းအချက်အလက်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးတန်ဖိုးရှိသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် link နှင့်ပြwithနာမရှိပါ။ အခြားအရာအားလုံးသော်လည်းစော်ကားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ 6, 2017 မှာ 8: 52 AM
ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူရမည်🙂သို့သော်ခြွင်းချက်များအမြဲရှိသည်။ အကယ်၍ ဆောင်းပါးသည်ကောင်းမွန်စွာရေးသားပြီးတန်ဖိုးရှိပါကလင့်ခ်သည်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဧပြီ 18, 2017 မှာ 11: 04 AM
တကယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့အရည်အသွေးတွေ နိုင် စိတ်နာတယ်